Misoro yeNhau dzaNhasi, Chishanu, Gunyana 04, 2020
Bazi rezvehutano rakazivisa nezuro kuti huwandu hwevanhu vabatwa nechirwere cheCovid-19 hwakanga kwasvika pazviuru zvitanhatu nemazana matanhatu nemakumi manomwe nevasere, kana kuti 6 678, asi huwandu hwevafa hwakaramba huri pamazana maviri nevatanhatu kana kuti 206 sezvo pasina akafa.
Mutungamiri wenyika, VaEmmerson Mnangagwa, vanoudza musangano wePOLAD wechina kuti munyika hamuna dambudziko. VaMnangagwa vatiwo hurongwa hwekugovera ivhu kuvatema hahufi hwakadzorwa, vachiti zviri kuitika iye zvino kuteverwa nekuzadzisa zviri mubumbiro remitemo yenyika.
Vaimbove varwiri vehondo yerusununguko votatsurana pamusoro pehurongwa hwehurumende hwekuda kuripa vachana vakatorerwa mapurazi avo vamwe vachiti vari kutsigira hurongwa uhwu asi vamwe vachiti kwete.
Meya mutsva weguta reHarare, VaJacob Mafume, vanoti vachaita basa ravo nemazvo sezvinotarisirwa nevagari vemuguta reHarare, asi vachiti dambudziko guru nderekushaya mari inokwanira mabasa ose anofanirwa kuitwa nekanzuru yavo.
Vamwe vevatambi venhabvu vemuZimbabwe vari muSouth Africa vatarisana nekunyura muAbsa Premiership apo makundano aya arikusvika kwamvura yacheka makumbo mangwana. Michael Kariati anotipa nyaya iyi
Muchirongwa cheLiveTalk na8pm tiri kutarisa matambudziko akatarisana nezvizvarwa zveZimbabwe.